» मकवानपुरमा कोरोना नियन्त्रणका लागि कसरी काम हुँदैछ ?
३० बैशाख २०७८, बिहीबार ०७:५५
हेटौंडा । मकवानपुर जिल्लामा कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनले सक्रियता बढाएको छ । कोरोनाको नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाको समय अवधि बढाउनका लागि गृहकार्य समेत गरिएको छ । निषेधाज्ञा उलंघन गर्नेहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने र सवारीका साधन नियन्त्रणमा लिने काम गरेको छ ।
मकवानपुरका चार वटा स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा गरिएको भएपनि यसलाई वढाउँदै लैजाने प्रशासनको तयारी छ । मकवानपुरमा दिनहुँजसो कोरोना संक्रमितहरु थपीदै गएका छन् । यसका कारण मृत्यु हुनेक्रम पनि निकै बढेको छ । जिल्लका स्थानीय तह, प्रहरी, प्रशासन, स्वास्थ्य संस्थाको समन्वयमा काम भइरहेको मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे वताउनुहुन्छ ।
अहिले सम्म हेटौंडा अस्पताल सहितका स्वास्थ्य संस्थामा अक्सीजनको अभाब भने नभएको उहाँ वताउनुहुन्छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि यस अघि के–के काम भए अब कसरी काम गरिदै छ ? यही प्रश्न जनपत्रका प्रधान सम्पादक हरि हुमागाईंले मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत मणी पाण्डेलाई सोध्नु भएको छ ।